Crypto ukuhweba lokusebenza Robinhood iqala e Colorado - Blockchain Izindaba
Umoya wokuncintisana landscape for cryptocurrency Ukuhwebelana buyathuthuka e-United States. exchange Ukuqalisa Robinhood nje umemezele Twitter nokwanda kwalo ku Colorado. Yesikhulumi Ukuhweba uye obungagutshuzelwe commision-free ukuhweba Bitcoin e Colorado.
Ngaphezu cryptocurrencies, i-Palo Alto, Calif. ezisekelwe platform Ukuhweba futhi isekela amasheya, ETFs nezinketho.
Colorado, okuyinto for Rocky Mountain yayo iziqongo kanye nemithetho blockchain-friendly eyaziwa, ijoyina nedlanzana uthi efinyelela eCalifornia, Massachusetts, Missouri futhi Montana, konke okuyizinto Robinhood ungeze ekuqaleni kuka-Ephreli njengengxenye isimo-by-isimo ukukhishwa ezihamba kanye.
iziqondiso Crypto a ...
Thumela Previous:Bitcoin ATM inethiwekhi Coinsource isebenza nge multi-factor ubuqiniso e Acuant
Thumela Landelayo:Iran ngokusemthethweni uvala ukusetshenziswa cryptocurrencies
May 18, 2018 ngesikhathi 2:37 AM
Juni 3, 2018 ngesikhathi 3:06 AM